फ्री लागि सेल फोन पाठ संदेश मनिटर गर्न कसरी
तपाईं आफ्नो बच्चाको सेल फोन निगरानी गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका खोजी छन् भने, पत्नी, पति, कर्मचारी, जाँचमा चोर्ने प्रेमिका, प्रेमी वा जोडीलाई, हामी परीक्षण र केही शीर्ष मुक्त फोन अनुगमन सेवाहरू समीक्षा गरेका.
यी फोन ट्रयाकिङ अनुप्रयोग वा कार्यक्रम केही मुक्त छन् र केही मासिक शुल्क खर्च. सेल फोन ट्रयाकिङ सबैभन्दा चाहन्थे विशेषताहरु थाह अन्य व्यक्ति बिना एक व्यक्ति एसएमएस पाठ सन्देशहरू पढ्न सक्षम हुने हो. आफ्नो बच्चा भएको छ भने समस्या मा रही वा तपाईं जाँचमा चोर्ने को आफ्नो जोडीलाई को संदिग्ध हो, त्यसपछि यी सेल फोन गतिविधि trackers साँच्चै तपाईं अवस्था बुझ्न मदत गर्न सक्छ. सेल फोन स्थान प्रवेश कार्यक्रम यी विभिन्न प्रकारका सामान्यतया गोप्य iPhone वा एन्ड्रोइड फोन एक व्यक्ति मा स्थापित गर्दै छन्. त्यसपछि तपाईं सामान्यतया एक डेस्कटप कम्प्युटर मा एक वेबसाइट लग इन हुनेछ. एक पल्ट तपाईं मा अनुप्रयोग स्थापित फोन जडान गर्न आवश्यक जानकारी टाइप तपाईं मा लग. तपाईं त वास्तविक समय मा कि व्यक्ति स्थान देख्न हुनेछ, आफ्नो ज्ञान बिना आफ्नो एसएमएस पाठ सन्देशहरू सबै पढ्न (भित्र र बाहिर जाने वाला) र फोन पूर्ण कल इतिहास लग देख्न (भित्र र बाहिर जाने वाला).
ExactSp-एसएमएस Android निशुल्क लागि ट्रैकर र राम्रो Android app तपाईं दूर ट्रैक र एसएमएस निगरानी गर्न हुनेछ, एमएमएस, पाठ सन्देश, कल, र जीपीएस फोन स्थान. यो पाठ अनुगमन अनुप्रयोग एन्ड्रोइड फोन प्रयोगकर्ता को लागि सबै भन्दा गहिराई मा टाढाको ट्रयाकिङ र अनुगमन प्रणाली छ. तिमी बस निगरानी गर्न चाहनुहुन्छ लक्ष्य फोनमा एसएमएस ट्रैकर स्थापना. तपाईं त दूर सबै एसएमएस पाठ सन्देशहरू पढ्न सक्छन् (भित्र र बाहिर जाने वाला), एमएमएस मल्टिमिडिया सन्देशहरू, सबै फोटो पठाए र प्राप्त, यो व्यक्ति फोन कल लग हेर्न (यो व्यक्ति नाम सहित, फोन नम्बर, र तिनीहरूले त्यस व्यक्तिलाई कुरा कसरी लामो) र दूर पूर्ण वेब ब्राउजिङ इतिहास हेर्न. तपाईं पनि तिनीहरू हुन् र कुन समय मा बिल्कुल कहाँ हेर्न एक नक्सामा लक्ष्य व्यक्ति जीपीएस स्थान जानकारी हेर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं सजग हुने छैन ट्रैकिंग छन् व्यक्ति वा लक्षित तपाईं त्यहाँ हरेक चाल देख छन्, हरेक कल र हरेक पाठ. यस जानकारी को सबै आफ्नो फोन सहित कुनै पनि वेब ब्राउजर मा दूर देख्न सकिन्छ, ट्याब्लेट वा पीसी. आमाबाबु अब तपाईं उनलाई साथ छैनन् समेत सुरक्षित आफ्नो बच्चाहरु रहन मदत गर्न एक शक्तिशाली मुक्त उपकरण हुन सक्छ.
निःशुल्क सेल फोन अनुगमन सफ्टवेयर
फ्री लागि सेल फोन पाठ संदेश मनिटर गर्न कसरी – exactspy को विशेषताहरू
तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ: फ्री लागि सेल फोन पाठ संदेश मनिटर गर्न कसरी ?
Cell phone spy for iphone4मुक्त, निःशुल्क सेल फोन अनुगमन सफ्टवेयर, Iphone लागि निःशुल्क मोबाइल जासूस अनुप्रयोग, Iphone लागि निःशुल्क मोबाइल जासूस सफ्टवेयर, फ्री लागि सेल फोन पाठ संदेश मनिटर गर्न कसरी, सेल को लागि स्पाइवेयर